I-R940 Crawler Excavator esuka eLibherr | OOMATSHINI be-ACE
Iiyure ezingama-24 ezikwi-Intanethi: + 86-18968212829
Umbhobho wekhonkrithi oMbane ngesakhelo
ZN Umbane weVibrator
Ukuphakama okuphezulu kweKhonkrithi
Isandla esenziwe ngeVibrator yekhonkrithi
Injini ephathekayo Vibrator
Ikhonkrithi yoThango loomatshini
Hamba emva kweTower Power
Ikhonkrithi Screed Oomatshini
I-KCD umphezulu wokuGqibela kweScreed
Umatshini wekhonkrithi weScreed Screed
Ikhonkrithi yeVibrator Shaft
Phambili i-Plate Compactor
Icwecwe eliBuyiswayo leCompactor
Intsimbi Bar Bender
Intsimbi Bar umsiki
Inkcazo: CX10T / CX11A / CX11B
Inkcazo: CX12T / CX12A / CX12B
Inkcazo: CX13T / CX13A / CX13B
Inkcazo: CX15T / CX15A / CX15B
Inkcazo: CX17T / CX18A / CX18B
I-R940 Crawler Excavator esuka eLibherr
I-R & D yaseFrance kunye neziko lokuvelisa lisandula ukugqiba umatshini omtsha -R940 Crawler Excavator eziyimveliso yakutshanje kuthotho lwe-R 944C
Ukuxhamla kumava atyebileyo avela kuLibherr, umatshini omtsha unesakhono esisebenzayo, kwaye oko kunokwakha umgangatho omtsha wesikhuseli esizayo. Kungenxa yokuba lo matshini unokwenza umdlalo ongaphezulu kokusingqongileyo. Kwaye loo matshini ukongeza ukungabinanto kwe-R950 kunye ne-R960 uthotho unokulungela ngakumbi indawo yokudiliza.
Isuti yomatshini omtsha we-EU-5 ukukhutshwa okuqhelekileyo. Kwaye inqanaba lokuvelisa linokufikelela kwi-200KW, kwangaxeshanye i-DOC, i-sytem ye-SCR, i-DPF kunye nokwehlisa i-valve ye-EGR. Zonke ezi zixhobo zinokwenza ukonga amafutha kunye nokukhusela i-Injini. Ngaphandle koko, inokubonelela ngohlobo lweTier 4 lokugqibela. Ekugqibeleni, uLibherr ubonelela ngenjini ehambelana nayo kwintengiso ethile.
Nantsi inxenye ebalulekileyo ye-LDC, Ngokukhusela indawo yokugcina ukhuseleko, uMqhubi unokwazi indawo yomatshini kunye nendawo yedozer, ukuba kukho ingozi i-LDC iya kufumana umyalezo ukuze umqhubi awazi.
Kwangelo xesha ikhabhathi yoMqhubi yenza uhlengahlengiso ngakumbi njenge-Hydraulic chassis, kunye neplate ye-Counterweight esuswayo. Umqhubi unokusebenzisa isiguquli somoya ukwenza umoya omtsha kwigumbi lokuhlala.
Lo matshini mtsha unokwakha kwakhona umgangatho woMdibaniso wokuDiliza.
Umnqophiso: Sizisa izixhobo zokwakha eziya kwenza umsebenzi wakho ube lula
Umbono: Ukuba ngumboneleli ogqwesileyo wehlabathi wezixhobo zokwakha zeekhontrakthi ezinobungcali
Amaxabiso: kugxilwe kubathengi, uBuchule, ukubulela, ukuphumelela kunye
Idilesi: IShenjiao Village, iGulin, Ningbo, China 315159